मेनोपजमा के गर्ने - स्वास्थ्य - प्रकाशितः फाल्गुन ९, २०७३ - नारी
मेनोपजमा के गर्ने
डा. रंगीना लाइकांगबम शाह
महिलाहरूमा ५० देखि ५५ वर्षको उमेरमा मेनोपज हुने गरेको छ । यसलाई महिनावारी सुक्ने पनि भनिन्छ । त्यसपछि हरेक महिलाको जीवनमा गर्भधारणको अवधि सकिन्छ ।
मेनोपजमा देखापर्ने परिवर्तन
मेनोपजमा हार्मोन परिवर्तन हुन्छ । यसमा महिलाहरूको शरीरमा एस्ट्रोजोन हार्मोनको कमी हुँदै जान्छ । यो हार्मोनको कमीले छाला, हड्डी, केश, मुटु, मस्तिष्क तथा पिसाब थैलीको प्रणालीमा असर पार्नसक्छ । धेरैजसो महिलामा शरीर तात्ने, राति पसिना आउने, रिस बढी उठ्ने, झिजो लाग्ने एवं मानसिक तनाव आदि लक्षण देखापर्छन् ।
दूध, दही, पनीर तथा दूधका उत्पादनहरू ।
प्रोटिनयुक्त खानेकुरा गेडागुडी, अण्डाको सेतो भाग, माछा आदि ।भिटामिन भएका खानेकुरा जस्तै फलफूल, गाजर, सागपात, ब्रोकाउली आदि ।
मेनोपजपछि के नखाने ?
चिया, कफी तथा चिनीको मात्रा बढी भएका खानेकुरा, प्रोसेस्ड फुड्स (डिब्बामा आउने खानेकुराहरू), बढी मात्रामा मसला भएका खानेकुरा, अल्कोहल (रक्सी), धेरै नुनिला कुराहरू, रातो मासु एवं तारेका खानेकुरा आदि ।
मेनोपजमा असर गर्ने खानेकुरा
अमेरिकन एकेडेमी अफ फिजिसियनद्वारा गरिएको अध्ययनअनुसार पिरो खानेकुराले मेनोपजमा शरीरको तापक्रम बढाउँछ र हट पल्सेस (शरीर एकैछिनमा तात्ने) वृद्धि हुन्छ । चिनीको मात्रा धेरै भएका खानेकुराले शरीरमा ग्लुकोज (सुगर) को मात्रा बढाउँछन् जसले गर्दा तौल बढ्नुका साथै मेटाबोलिक डिसअर्डर देखा पर्नसक्छ । यसैगरी मधुमेह टाइप २ हुने सम्भावना वृद्धि हुन्छ भने मुटुमा समेत असर देखिन सक्छ ।
धूम्रपान तथा मदिरापान
मदिरापान गर्ने महिलाहरूमा शरीर तात्तिने, झिजो मान्ने र राति निद्रा नलाग्नेजस्ता समस्या देखा पर्नसक्छ । अमेरिकन मेनोपज सोसाइटीद्वारा गरिएको अध्ययनअनुसार मदिरापान गर्ने महिलामा मेनोपजपछि मानसिक तनावका लक्षण देखिन्छन् । चिया, कफी, चकलेटहरूले पनि एकैछिनमा शरीर तात्ने (हट फ्लासेस) तथा पसिना आउने हुन्छ ।
नुनको मात्रा बढी भएको खानेकुराले प्रेसर बढाउनुका साथै मुटुको समस्या सिर्जना गर्छन् । रातो मासु, तारेका खानेकुरा तथा जंक फुडले पनि मुटु, हड्डी तथा हर्मोनमा असर गर्नसक्छ । फस्फोरसको मात्रा बढी भएका खानेकुराले हड्डीको क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको मात्रा घटाउनसक्छ । मेनोपज सबै महिलाको जीवनमा हुन्छ । यसमा कुनै अस्वाभाविक वा विशेष परिवर्तन देखिए स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञसँग सुझ्mाव लिनु उपयुक्त हुन्छ ।